३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी चुडि`एपछि… – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी चुडि`एपछि…
३३० फीट उचाईबाट बन्जी जम्प गर्दा डोरी चुडि`एपछि…
एजेन्सी- बन्जी जम्प शाहसिक खेल हो । यसमा धेरै साबधानी अपनाइन्छ । जो कोहीले बन्जी गर्ने आँट पनि गर्दैनन् ।बन्जी जम्म गर्नेहरुका लागि धेरै सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिलेकाहीँ नसोचेको दुर्घटना हुनसक्छ ।हालै एकजना बन्जी जम्प गर्ने क्रममा डोरी चुँडिएर भुइँमा बजारिएका छन् ।
घटना पोल्याण्डको हो । पोल्यान्डको गडीनियामा एकजना बन्जी जम्पर ३३० फीट माथिबाट हाम्फाल्ने क्रममा डोरी चुडिँदा भुइँमा बजारिएर करङ भाँचिएको छ ।स्वास्थ्य ठीक भएपनि तत्काल उनी हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थाम भने रहेन । गडीनिया प्रहरीका क्रिस्टोफ कुस्मीरजिकले घटना पछि घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी र कर्मचारीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइएको बताए ।
घटनाको भिडियो हेर्दा उनको टाउको भुइँमा राखिएको एयरब्यागमा बजारिएको देखिन्छ । एयरब्यागमा बजारिएपछि उनी उफ्रिन्छन् अनि रोकिन्छन् । अनेकौं कर्मचारीहरूले उनी ठीक छन् कि छैनन् भनी हेर्न गएको देखिन्छ ।
स्थानीय समाचार वेबसाइट ट्रोमियास्तो डट् पीएलका अनुसार, भुइँमा बजारिए पछि उनी अचेत भए र उनलाई अस्पताल लगियो । भाग्यवश दुर्घटनाबाट उनी बाँचे । उनको करङ टुक्रिएको छैन र अलिकति भाँचिएको अस्पतालले जनाएको छ । उनको अन्य अंगमा पनि केही चोट पुगेको बताइएको छ ।
चिनिया सरकारले राज मार्गमा पर्ने घर लाई बीचमा राखेर पुल बनाए पछि, भिडियो भाइ`रल !
A young boy kicked offacar that hit his mother inaviral on social media
मेमोरी कि`ङ्ग विजय शाहीको सम्झने सु`त्र यस्तो रहेछ ! भिडियो हेर्नु होस्
मेमोरी किङ्ग विजय शाहीले ‘इन्द्रेणी’ मा देखाए यस्तो चमत्कार (भिडियो हेर्नुस् )